4 Xildhibaan oo midi gabar tahay oo lagu doortay Garoowe | Dhacdo
Home Wararka Maanta 4 Xildhibaan oo midi gabar tahay oo lagu doortay Garoowe
4 ka mida kuraasta Golaha Shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay Puntland ayaa maanta lagu doortay Magaalada Garoowe ee Xarunta Maamulka Puntland.
Doorashada oo ka dhacday Xerada 54aad ayaa waxaa kursigii 1aad oo tirsigiisu ahaa #HOP128 ku guuleystay Maxamed Cabdiraxman Axmed (Xayle), markii uu 96 cod kaga adkaaday musharaxii la tartamayay oo lagu magacaabo Maxamed Faarax Cali.
Kursigii 2aad oo tirsigiisu ahaa HOP223 waxaa codad gaaraya 93 cod ku hantiyay musharax Xildhibaan oo lagu magacaabo Xirsi Jaamac Gaani.
Fardowso Cismaan Cigaal ayaa ku guuleysatay kursigii xigay oo tirsigiisu ahaa #HOP232. Gabadhan ayaa doorashada kaga adkaatay gabar kale oo lagu magacaabo Saciido Faarax Warsame, iyada oo heshay 97 cod.
Kursigii ugu dambeeyay oo ku calaamadeysnaa #HOP144 ayaa waxaa ku tartamay Cabdiqafaar Cilmi Xaange iyo Caasho Axmed Maxamed, waxaana 83 cod ku guuleystay Cabdiqafaar Cilmi Xaange, iyadoo Caasho Axmed ay heshay 13 cod, halka 4 cod ay xumaadeen.
Previous articleQaali Axmed oo noqotay gabadhii ugu horeysay ee Galmudug laga soo doorto
Next articleGolaha Wasiirada oo isku raacay in ciidamada laga soo saaro Beledweyne